Ntụtụ na anụcha anụ ezi
Mkpịsị aka nke anụ ezi na nri nwere ntakịrị ihe dịka 10 site na sentimita 3. Enwere ike ijere ha ozi ọma, ma dị ka nri oyi na-eri nri. Ihe omimi nke nri di na njuju, nke n'eme ka uto nke anu anu aru. Ka anyị lelee anya isi mee mkpịsị aka.
Nri anụ ezi na mushrooms
anụ ezi anụ - 600 g;
achịcha crumbs - 150 g;
akwa - 2 iberibe;
mkpụrụ oliv - 30 g;
ndị ọkachamara ọhụrụ - 100 g;
anụ ezi - 50 g;
bọlbụ - 1 ibe;
akọrọ Mọstad - tuo.
Mbụ ka anyị mee ka ihe ndabere maka efere gị. Iji mee nke a, kpochapụ anụ ezi na mmiri na-agba oyi ma jiri nwayọ na-atụgharị ya na nhicha akwụkwọ. Mgbe ahụ, bee anụ ahụ dị ka mpekere ndị dị mkpa, dịka nsị. Mgbe nke ahụ gasị, gụkọta anụ ezi ahụ na mọstad ghaa ma tinye ha n'ime friji ahụ ruo minit 40. Mgbe ahụ anyị na-eti ya ihe ọma, gbakwunye nnu na ose. Ugbu a gawa ozugbo. Bee n'ime obere anụ ezi ma gbanye ya na pan. Bulb na ndị na-eme egwuregwu na-emecha shred na-agafe na anụ ezi. Mgbe ahụ, a gwakọtara ngwakọta ahụ ma tinye ya na oliv na-acha ọcha. Anyị na-ebute anụ anụ, anyị na-etinye ya na nri ma wepụ anụ ezi akwụkwọ. Anyị na-edozi ihe niile na mpepịpịa, griiz na egg amia na crumble na breadcrumbs. Nri mkpịsị aka nri site na anụ ezi maka minit isii na akụkụ nke ọ bụla na mmanụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị na-etinye ha na efere mmiri ma na-akpọ nkụ na oven maka minit 15, na-edozi okpomọkụ na 170 Celsius. Tupu i jiri ya mee ihe, jiri nlezianya wepụ ihe nkwụ ahụ wee jee ozi mkpịsị aka na tebụl.
Nri anụ ezi na prunes
anụ ezi pulp - 800 g;
prunes na-enweghị pips - 150 g;
mmanụ ọka - 30 ml;
mmiri - 500 ml.
A na-asacha ọka nsị nke ọma na bee n'ime mpekere ndị dị mkpa. Mgbe ahụ, tinye ha na akpa cellophane ma tie aka nke ọma. Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-awụsịrị ibe ọ bụla, na-eme ka ọ dị ụtọ ma detụ ya. A na-edozi ya, na-asacha, wepụ ọkpụkpụ ma gbanye mkpụrụ osisi a mịrị amị na mmiri ọkụ ruo minit 15. Mgbe oge ọ bụla maka anụ ezi ọ bụla, gbasaa tomato ole na ole ma jiri nlezianya gbanwee anụ ndị ahụ ka ha na-atụgharị, na-etinye ọnụ n'akụkụ ya ma ọ bụ na-edozi ihe na-eri nri. Ugbu a, wụsa mmanụ ihe oriri n'ime ite frying ma kpoo ya. Anyị na-edozi blanks ndị a kwadebere ma na-ata ha n'akụkụ nke ọ bụla ruo mgbe ọkpụkpụ mara mma dị. Mgbe nke ahụ gasị, anyị na-agbanwe mkpịsị aka anyị gaa na saucepan. Anyị na-ehichapụ bọlbụ ahụ, shinkuyem yiri mgbaaka, passuem na mmanụ fọdụrụ wee gbakwunye anụ ahụ na anụ ahụ. Gwunye obere mmiri, tuo akwukwo laurel na uzo nke anu ezi ihe dika nkeji iri na ise na obere oku.
Nri anụ ezi na cheese
anụ ezi pulp - 500 g;
chiiz siri ike - 100 g;
Mayonezi - 200 ml;
anụ ọkụkọ - 3 iberibe;
ntụ ọka - 2 tbsp. ngwunye;
mmanụ na-esi ísì ụtọ maka nchịkọta.
Acha anụcha, ehichapụ ma bee n'ime mpekere dị mkpa, ihe dị ka sentimita 1 n'obosara. Mgbe ahụ, anyị na-akụ anụ ahụ nke ọma, jiri nnu na ose sie ya ụtọ. N'ebe a na-agụ ihe, anyị na-ata cheese, jikọta ya na peeled garlic, oge ya na Mayonezi ma kpoo ihe niile. Anyị na-agbasa nri a kwadebere na ncha ma na-atụgharị anụ ahụ na mpịakọta, na-edozi n'ọnụ ya na onikpị. Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị na-etinye mkpịsị aka ndị ahụ na ntụ ọka ahụ, mgbe ahụ, n'anụ ahụ a kụgburu na ighe na mmanụ buru ibu n'ime pan ruo mgbe e guzobere eriri.
Shiol Caesar na kabeeji Pekinese
Esi esi esi nri rassolnik na osikapa?
Salad salad na garlic na chiiz
Meat casserole na oven
Salad na rusk na ham
Azu na-esi na oven
Bọ kabeeji na akwa
Kedu esi esi esi esi nri?
Kedu ihe na-atọ ụtọ ka akpọọ nkụ na oven?
Achịcha anụ na yabasị na frying pan
Salad beetroot na cheese
Aubergines na oven na tomato
Kedu ihe tọrọ ụtọ iji esi nri?
Pests nke apple osisi
Ihe ndị a ga-eme maka Afọ Ọhụrụ
Pita achịcha na chiiz na elu
Kedu ihe mmanya mere nke geynera?
Ọfụfụ n'èzí n'èzí maka ụlọ na-enweghị ụgbọ mmiri
Kedu otu ngwa ngwa iji dozie maka ule?
Akpa akwụkwọ nri 2013
Okooko osisi sitere na mastic - otu klas nke ndị na-amalite
Mmanụ aṅụ na jelii eze
Olee otu esi emeso veinsic veinsose?
Ebe e wusiri ike nke otuto
Ememe na Saudi Arabia
Liam Neeson mebiri iru újú ahụ ma malite izute "onye ọmarịcha mara mma"
Ime mgbanwe ngwa ngwa
Ejiji ejiji na olu 2013
Mmiri ara ara abụghị abụba
Obere aka aka
Ihe eji esi nri si osisi siri ike
Enwere m ike iji ụyọkọ maka ụmụ agbọghọ?